महामारी रोक्न चीनले चालेका ७ कदम : नेपालले के सिक्यो? - Mitho Khabar
March 30, 2020 mithokhabarLeaveaComment on महामारी रोक्न चीनले चालेका ७ कदम : नेपालले के सिक्यो?
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी फैलिएपछि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसविरुद्ध ‘जनयुद्ध’ घोषणा गरे। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २१ दिन देश लकडाउन गर्दै कोरोनाविरुद्धको लडाइँलाई ‘महाभारत’ को युद्धसँग तुलना गरे।
कोरोना भाइरस फेलिएको वुहान सहरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ । एजेन्सी फाइल तस्बिर ।
यी तीन राष्ट्रप्रमुखको भाषा फरक भए पनि सार एउटै छ– युद्धस्तरमा जुटेर कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्ने। चीन यतिबेला कोराना भाइरसविरुद्ध विजयोन्मुख छ। नेपाल र भारत ‘यल्लो जोन’ मा छन्। कोरोना भाइरस रोक्ने अभियानमा दुवै देश लकडाउन छन्।
डिसेम्बर अन्त्यतिर हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिएपछि चीनले प्रमुख सात काम सुरु गरेको थियो। सुरुमै सी चिनफिङले ‘दुष्ट भाइरस’विरुद्ध लड्न ‘जनयुद्ध’ घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री ली खछियाङको नेतृत्वमा महामारीविरुद्ध लड्ने समिति बन्यो, जसरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा नेपालमा विशेष समिति बनेको छ। चीनले यसरी सात चरणमा युद्ध स्तरमा काम थालेको थियो।
हुबेई र खासगरी त्यसको राजधानी वुहानमा संक्रमण थप फैलनबाट रोक्नु पहिलो चुनौती थियो। सहर पूरै सिल गरियो। बिरामीको उपचारका लागि वुहानमा उपचार गर्न ८६ अस्पताल तोकियो। घरघरमा सन्देश पुर्‍याइयो। ‘मास्क लगाउनुस्, साबुनपानीले हात धुनुस्, भीडमा नजानुस्, सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुस्।’ नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा गरेको काम पनि त्यही थियो। पहिलो चरणमा उपचारका लागि अस्पताल तोकियो, अस्थायी अस्पताल व्यापक बनाइयो। बिरामी दिन दुई गुणा रात चौगुणाभन्दा बढी हुन थालेपछि अस्पतालको संख्या पनि त्यही रुपमा बढाइयो।
एक हिसाबले सरकारले पहिलो चरणमा कोरोनाविरुद्ध ‘वाकयुद्ध’ गरेजस्तो अनुभूति हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको विशेष समितिको निर्देशनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य निकायले पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गरेको देखिएको छैन।
तीन महिनाअघि वुहानमा देखिएको महामारी विश्वभर फैलिन्छ भन्ने अनुमान एक महिनापछि भइसकेको थियो। ‘चीनको भाइरस’ हो भन्ने मानसिकताले त्यसलाई रोक्ने काम नहुँदा हाल विश्व संक्रमणको चपेटामा परेको छ। नेपालले पनि भित्रिन सक्ने अनुमान नगरेको होइन, तर त्यो अनुसार काम भएन।
नेपाल माहामारीको ‘एल्लो जोन’मा भएको अवस्थामा मेडिकल सामाग्री जसरी भए पनि यहाँ ‘खन्याउनु’ आवश्यकता छ।
राजनीतिक दृढता भयो भने सबैखाले महामारीसँग जुध्न सकिने उदाहरण चीनले देखाएको छ। चीनले १९४९ पछि यति ठूलो जनस्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था कहिल्यै सामना नगरेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बुझाइ छ। राष्ट्रपति सीले यो महामारी सरकारका प्रणाली र क्षमताका लागि परीक्षण भएको बताएका थिए। कोरोनाविरुद्धको ‘जनयुद्ध’ मा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री सुन छुन्लान वुहान पुगेका थिए।